novembre 2017 - Page 85 sur 85 -
Fikasana hanao fanafihana : Jiolahy roa lavon’ny zandary, telo azo sambo-belona
02/11/2017 admintriatra 0
Raikitra ny fifandonana sy ny fifampitifirana teo amin’ny zandary sy ny andian’olon-dratsy mpanao fanafihana mitam-piadiana ny alin’ny alahady hifoha alatsinainy lasa teo, ka lavo tamin’izany ny roa tamin’ireo jiolahy. Telo hafa kosa no azon’ny mpitandro …Tohiny
Tsy honohono intsony fa tena misy. Nisy namarotra tokoa ny tany sy tranom-panjakana, ny Villa Elisabeth, izay nitoerana sy nipetrahan’ny Filoha teo aloha Zafy Albert sy ny vady aman-janany eny Ivandry. Tamin’ny Fitondrana Tetezamita no …Tohiny
Taorian’ny fanambaran’ny filohan’ny antenimieran-doholona teo, Honoré Rakotomanana, izay filoha teo aloha, ny amin’ny tsy fahefany intsony hanatanteraka ny andraikitra ny maha lehiben’ ity andrim-panjakana ity intsony azy, dia nanapa-kevitra avy hatrany ireo mpikambana eo anivon’ …Tohiny
Tsy ampihambahambana. Nambaran’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara na ny HVM tamin’ny fomba ôfisialy omaly, fa manosika ary mangataka ny firotsahan’i Hery Rajaonarimampianina ho fidiana filoham-pirenena amin’ny fifidianana taona 2018 izy ireo. “Tsy manana kandidà afa-tsy ...Tohiny